Waraysi Hadhwanaag La Yeelatay Dr Mohamed Abdilahi Omar | Somaliland.Org
December 31, 2008	Hargeysa (HWN):-Xoghayaha guud ee dhinaca arrimaha dibada u qaabilsan Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar, ayaa hadalkii Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ku sheegay in Cid kasta oo danaynaysa in ay Budhcad Badeeda la dagaalanto ay fasax u tahay isticmaalka Dekeda Berbera, ku tilmaamay mid nabadgalya-darro dalka iyo dadka u horseedi kara, isla markaana aan loo baahnayn in Xukuumad wakhtigeedi dhamaaday ay dalka ku casuunto Ciidamo Shisheeye.
Xoghayaha oo u waramayay maanta Wariye Mustafe-Janaale oo ka tirsan Shabakada Wararka ee Hadhwanaagnews.com ee Magaaladda Hargeysa, waxa uu ku dheeraaday saamaynta dalabka Madaxweyne Rayaale u horseedi karo dalka Somaliland, sida loogu baahan yahay in laga fiirsado. Sidoo kale Maxamed Cumar waxa uu ka hadlay xaaladda Komishanka doorashooyinka, arrintii Maxamed Baaruud Cali lagaga hor joogsaday jagadii Agaasimaha diiwaan-gelinta ee uu ku guulaystay, doorka dhalinyarada iyo arrima badan oo door ah.
Waraysigan oo xiisa badan, isla markaana dhinacyo badan taabanaya, waxa ugu horeyn la waydiiyay Dr. Maxamed, doorka dhalinyarada iyo KULMIYE ahaan qorshaha uga meelyaalaa waxa uu yahay, isaga oo su’aashaa ka jawaabayayna waxa uu yidhi, “Waxa jirta siyaasada uu Xisbiga KULMIYE damacsan yahay in uu hirgeliyo, haddii uu ku guulaysto talada dalka, oo ku saabsan da’da ka qayb-galka siyaasadda ee dalka Somaliland. Qaynuunka Somaliland imika wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu xil qabto ama Golayaasha Deegaanka iyo Baarlamanka, da’adiisu waa inaanay ka yaraan 36 jir. Arrintaasi Xisbi ahaan waxaanu u aragnaa mid xakamaynaysa ka qayb-galka siyaasadda ee dhalinyarta reer Somaliland.dhalinyartuna waa mustaqbalkii dalka, waa aqoontii dalka, waa xoogii dalka, waxaanay u baahan yihiin in aan siyaasadda laga xakamaynin.”
“Tusaale ahaan doorashooyinka oo kale dadka kuyuuga gala ee u soo baxa hirgelinta qadiyada Somaliland waa dhalin yaro rag iyo dumarba. Barnaamijkan imika socda ee diiwaan-gelinta codbixiyayaasha marka laga yimaado Golayaasha Qaranka iyo Hay’adda Komishanka, cidda xooga u ah ee bud-dhiga u ah ee fulinaysaa waa dhalin yaro. Markaa waxaanu Xisbi ahaan aqoonsanahay in dhalinyaraddu ay Somaliland horumarkeeda door muhiim ah ka qaadato, laakiin aan taa laga turjumin marka xagga qaynuunka laga eego. Sidaa awgeed shir aan shalay ka qayb-galay oo ay yeesheen Dalada Ururada dhalinyarada Somaliland waxaan ka sheegay oo aan daboolka ka qaaday in siyaasadda Xisbigu tahay in da’adaa 36 jirka ah aanu hoos u celino oo ka dhigno 21 jir, oo muwaadin kasta oo reer Somaliland ahi oo da’adiisu gaadhay 21 jir isu soo taagi karo Xafiis kasta oo cid lagu dooranayo.” Ayuu yidhi Xoghayaha amuuraha dibada ee Xisbiga KULMIYE Dr. Maxamed Cabdillaahi.
Mar la waydiiyay Xoghayaha arrimaha dibada ee Xisbiga KULMIYE aragtidiisa ku wajahan Safarkii uu Madaxweynaha Somaliland dhawaan ku tagay wadamada Jabuuti iyo Itoobiya, waxa uu ku jawaabay. “Horta wax war ah oo cad oo ku saabsan Safarkii ay Madaxweynaha iyo Weftigiisu ku tageen Jabuuti iyo Itoobiya oo rasmi u soo baxay ma jiro. Warka qudha ee aanu maqalay waxa weeye oo aanu horena u maqli jirnay Madaxweynuhu marka uu wadamada dibada tago, waxa weeye in wadahadaladu ku dhamaadeen si is af-garad ah.” Xoghayuhu isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi,
“Laakiin xog kale oo ka soo baxday ma jirto, waxa-se muuqata arrimihii uu Madaxweynuhu u tagay Jabuuti oo aanu ognahay inay is arkeen nin ka tirsan Aqalka Senet-ka Maraykanka iyo La taliye xagga Millatariga ah, in ay u badnaayeen baa filayaa wadahadaladoodu arrimo xagga iskaashiga nabadgalyada ah. Inkasta oo aanu ninkaasi ka socon Xukuumaddii dalka, waayo Aqalka Senet-ka ninka ka socdaa waa Gole ka tirsan Hay’addaha Sharci-dejinta, laakiin Hay’addii fulinta ee Maraykanka kamuu socon, haddana waxaanu aaminsanahay in wadahadalkoodu ku saabsanaa arrimaha la dagaalanka Budhcad Badeedda.”
Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar, waxa uu si weyn u falanqeeyay arrinta Ciidamo dalka Somaliland yimaada iyo saamaynta ay yeelan karaan, waxaanu isaga oo jawaabtiisa sii wata yidhi, “Intaanu Madaxweynuhu tagin Jabuuti waxa uu waraysi siiyay Jariirad Maraykan ah oo la yidhaahdo Washitong Times, kaasoo uu kaga hadlay siyaasadda Xukuumaddiisa eek u saabsan la dagaalanka Budhcad Badeedda, siyaasadaasoo uu Madaxweynuhu sheegay inay u fasaxayso cid alla ciddii doonaysa inay ka hortag xagga Millatariga ah la gasho Budhcad Badeeda. Inkasta oo Xisbiga KULMIYE soo dhawaynayo in ay Somaliland ay iskaashi la samayso Bulshooyinka Caalamka, oo ay iska kaashadaan xagga nabadgalyada, Ganacsiga, dumuquraadiyada, horumarka iyo nabadgalyada intaba.”
“Hase yeeshee, arrintaasi Anniga iiguma muuqato mid iskaashi ah, waayo falalka Budhcad Badeedu waxay ka dhacaan Badaha Hindiya iyo Baddaha Soomaaliya. Laakiin dhulka falalka Budhcadu ka dhacaan maaha dhul Sharci ahaan hoos yimaada Jamhuuriyadda Somaliland, sidaa daraadeed, arrinta Budhcad Badeedu waa mushkilada caam ah oo caalamka u taalla, ee maaha arrin u gaar ah martina u ah Somaliland wax ka qabashadeedu, kaliya waxa u taala in ay Somaliland kala qayb-gasho dunida kale xalinteeda. Markaa dariiqa uu Madaxweyne Rayaale qaaday oo ah in Ciidamo Millatari ah oo aan kala soocba lahayn oo ka kooban Maraykan, Ingiriis, Faransiis iyo wadamada soo koraya, cid waliba ay timaado Berbera, si ay Budhcad Badeeda ula dagaalanto, waxaan u arkaa arrin aan siyaasadeeda laga fiirsan, oo waliba Shacbiga Somaliland nabadgalyo-darro u keenaysa.” Ayuu hadalka jawaabtiisa sii raaciyay Xoghayaha arrimaha dibada ee Xisbiga KULMIYE.
Xoghayahe Maxamed oo la waydiiyay, inay dad badani u arkaan talaabadan Madaxweynuhu qaaday mid soo de-dejinaysa Aqoonsiga Somaliland iyo horumar dalku gaadho, sidaa daraadeed sababta uu isagu dhibta ugu arko, waxa uu ku jawaabay, “Dawladuhu marka ay ka qayb-galayaan arrinta Budhcad Badeeda,, waxa marka hore la tixi-geliyaa nabadgalyada Shacbigaaga. Markaa Madaxweyne Rayaale waa inuu marka hore sugaa nabadgalyada Shacbiga Somaliland, talaabada uu qaadayana u eegaa inay tahay mid sugaysa nabadgalyada Somaliland, intaanu ka fikirin nabadgalyada Caalamka iyo ta Gobolka Geeska Afrika. Annagu waxaanu u aragnaa talaabada u yeedhida Ciidan la dagaalama Budhcad Badeeda, oo aanay xiligan noo cadayn waxa ay Somaliland waydaarsatay ogolaansha, faa’iido xagga dubla maasiyada ah oo muuqataa oo Madaxweynuhu wax ka tusay Golayaasha Qaranka iyo Axsaabta ma jirto, faa’iido dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo Shacbiga Somaliland ugu soo hoyanaysa bandhiga Aduunka loo bandhigay inay Millatari Berbera la keeno ma jirto.”
“Mar haddaanay taasi jirina Annagu uma aragno Talaabadaa Madaxweynuhu qaaday mid wax tar leh, ee waxaanu u aragnaa inay noqon karto mid waxyeeli karta nabadgalyada oo cadaw aynaan lahayn Innagu soo jeedin karta. Arrinta Budhcad Baddeeda Xisbiga KULMIYE wuxuu u aaminsan yahay mid nabadgalyada Caalamka iyo Gobolka-ba khatar ku ah, laakiin wax ka qabashadeedu maaha in Ciidamo shisheeye la keeno dalka, ee wax ka qabashadeedu waxa weeye in Adduuku ku caawiyo Soomaaliya sidii looga dhisi lahaa dawlad nabadgalyada hanan karta, si ay wax uga qabato Budhcad Badeeda.” Ayuu sii raaciyay jawaabtiisa Dr. Maxamed Cumar.
Waxaanu intaa ku sii daray oo uu yidhi, “Waxaanu u aragnaa in iskaashi ay wadamada (Somaliland, Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya, Yemen) iyo wadamada Jaarku ay si wada jir ah uga wada-tashadaan sidii Budhcad Badeeda wax looga qaban lahaa. laakiin, in Ciidamo Millatari ah oo dalal kale ka yimi oo Budhcad Badeeda la dagaalama lagu soo macsuumo Somaliland, oo weliba ay Casuunto dawlad xiligii loogu talagalay uu dhamaaday, wakhtigii ay Xisbiyada Mucaaradku ugu dareena uu gabaabsi ku dhawyahay oo saddex bilood ay ka hadhay, inay Millatarigii Adduunka ugu yeedho Berbera, waxaanu u aragnaa arrintaa Xisbi ahaan inay tahay arrrin aan ku haboonayn, waxna yeeli karta nabadgalyada Somaliland, Madaxweynahana waxaanu ugu yeedhaynaa inuu nabadgalyada Shacbiga Somaliland ka horeysiiyo arrimaha kale.”
Waxa kale oo la sii waydiiya, Xoghayaha waxa uu u arko in ay Somaliland waydaarsan lahayd dhinacyada uu sheegay in Madaxweyne Rayaale dalka ku casuumay iyo qorshaha guud ahaan Xisbiga KULMIYE uga yaala Ciidamo shisheeye oo dalka yimaadda, waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, “Waxaan Madaxweyne Rayaale ka codsan lahaa, marka uu go’aamo ah in uu Ciidamo Shisheeye uu ku casuumayo Somaliland, waa inay noqotaa arrin loo gudbiyo Baarlamaanka Somaliland, waayo Baarlamaanku waxa uu masuul ka yahay Shacabka, arrintana waa arrin nabadgalyada Shacabka saamayn karta. Markaa waxaan leeyahay Madaxweynuhu marka uu samaynayo arrin noocan oo kale ah, waa in Golayaasha Qaranka iyo Axsaabta Qaranku ay ka wada-tashadaan oo ay talo Qaran ka yeeshaan, waayo waa arrin nabadgalyo oo si dadban Somaliland u saamaynaysa, guud ahaanna Baayac-mushtarka Adduunka iyo Gobolkaba u saamaynaysa. Markaa Madaxweynaha waxaanu ka filaynay in arrimaha caynkaasoo kale ah marka uu go’aan ka gaadhayo ay noqoto mid ku timaada tala Qaran, laakiin aanay noqon talo qof gaar ahi uu gaadho.”
Sidoo kale, Dr. Maxamed Cumar oo ka jawaabayay su’aal laga waydiiyay Komishanka doorashooyinka oo dhaliilo badan wakhtigan loo jeediyo, waxa uu yidhi, “Waxa nasiib-wanaag ah oo aan Shacbiga reer Somaliland ugu hambalyaynayaa sida quruxda badan ee ay diiwaan-gelinta uga qayb-qaateen. Hasayeeshee, waxa soo baxaya Galdaloolooyin iyo ceebo uu Komishanku leeyahay, maalin dhawayto waxa uu Guddoomiyaha diiwaan-gelintu, soo saaray war aanu la tashi kala samayn Guddigii Komishanka iyo Wakiilladii Xisbiyada Qaranka ka socday ayuu ku dhawaaqay tiradii codbixiyayaasha Gobolka Awdal ay jirto tiro 50,000 kun oo qof ah oo ku korodhay, Gobolada qaarkood ay tiradoodi hoos u dhacday, arrrintaasina waxay ahayd mid nasiib-darro ah, hase ahaatee, mar dambe ayuu hadlay oo uu yidhi qalad ayaa dhacaye ha la iga raali ahaado. Waxaanu Xisbi ahaan Annagu soo jeedinaynaa in maadaama iyada oo diiwaan-gelinti socoto khaladka intaa le’egi dhacay in la sameeyo Guddi baadhitaan, oo khaladka intaa le’egi siduu ku yimi, siduu ku dhacay iyo si looga hortago wax kale.”
Xoghayaha arrimaha dibada ee Xisbiga KULMIYE, waxa uu sheegay in loo baahan yahay Guddi Madaxbanaan oo ka daba shaqaysa Komishanka Doorashooyinka Somaliland. “Markaa waxa loo baahan yahay Guddi madax-banaan oo arrimahaa daraasad ku sameeya, wixii ceeb ah ee yimi iyo masuuliyadeedaba meel lagu tiiriyo, waxaanay ahayd in la sameeyo qof masuul ah oo ay ku soo dhacdo xogta guud ee diiwaan-gelinta, qofkii jagadaa ku guulaystayna waxa soo baxaya in Xukuumaddu Maxamed Baaruud Cali oo ah nin aqoonyahan ah oo reer Somaliland ah oo jagadaasi tartan u galay kuna guulaystay, ay iska hortaagtay, weli si rasmi ah looguma yeedhin. Markaa waxaanu codsanaynaa in jagadaasi la buuxiyo, si waajibaadka iyo masuuliyadda diiwaan-gelintu ay qof madax-banaan gacantiisa u gasho. Waxaananu ka codsanaynaa in ay dawladdu ninkaasi u ogolaato jagada uu ku guulaystay.”
Dr. Maxamed oo la waydiiyay maadaama Madaxweyne Rayaale iyo Xukuumaddiisu ay hore isu hortaageen Maxamed Baaruud in Shaqada uu ku guulaystay uu ka hawl-galo, cidda uu wakhtigan arrintaa sida tooska ah ugala hadlayo, waxa uu yidhi, “Waxaan u soo jeedinayaa Guddiga doorashooyinka Qaranku inay xilkooda gutaan oo ay masuuliyadooda ka run sheegaan, waxa masuuliyadiisa ka mid ah inuu baadhitaan ku sameeyo ceebaha ka soo baxaya hawl-galada Komishanka sida tirada qaladka ah ee lagu dhawaaqay, jagada Sarkaalka sar ee ku guulaystay Agaasinka diiwaan-gelinta in Komishanku qaraar ka gaadho iyaga ayaa u madax-banaan’e, Madaxweynuhuna aanu arrintaa is hortaagin.”